"Fa Andriamanitra mampiseho ny fitiavany antsika, fa fony mbola mpanota isika, dia maty hamonjy antsika Kristy."Romana 5:8
"Isika tia, satria Izy efa tia antsika taloha."1 Jaona 4:19
"Mifankatiava fatratra amin’ny fo."1 Petera 1:22
Paompy ampiasaina amin’ny lava-drano no resahina eto ; mora kokoa ny mampiakatra rano aminy, raha efa misy rano ao anatiny.
Nisy kristiana iray, indray andro, nitaraina tamina kristiana hafa, hoe tsy mba mahita fitiavana avy amin’ireo rahalahy sy anabavy ao amin’ny fiangonana misy azy. Izao no navalin’ilay olona niresahany: «Ry sakaiza, asio rano ao anaty paompinao! Hiandry ela ianao, raha mihevitra fa handeha fotsiny amin’izao izy io!»
Takatra tsara ny dikan’izany valinteny izany. Matetika isika no miandry zavatra betsaka avy amin’ny hafa, nefa tsy mba mihevitra izay tokony hataontsika amin’izy ireny! Soa ihany Andriamanitra fa tsy nanao tahaka izany tamintsika. Nitia antsika Izy, na dia mpanota sy fahavalo ary tsy nanan-kery hanatonana Azy aza isika (Romana 5:6-10). Raha voahombo teo amin’ny hazofijaliana Jesosy sady niteny ratsy Azy ny olona, dia nangataka tamin’ny Rainy Izy hoe: “Mamelà ny helony, fa tsy fantany izay ataony” (Lioka 23:34).
Aoka ho Izy no alaintsika tahaka! Aoka isika no ho voalohany haneho fitiavana manodidina antsika, na sarotra aza izany, ary na tsapantsika aza fa hetraketrahina sy atao toy ny tsy misy isika. Izany no dikan’ny hoe: «manisy rano ao anaty paompy». Tena ilaina izany mba hampiboiboika avy ao am-pon’ny rahalahy sy anabavy ilay rano be, izay hamelombelona antsika ihany koa avy eo.
Ary na tsy hisy vokany akory aza izany, aoka tsy ho kivy. Io adidim-pitiavana io dia ny Mpamonjintsika no nanome azy, ary tompon’andraikitra isika eo anatrehany. Nahatakatra tsara izany ny apostoly Paoly, ka niteny hoe: “Izaho dia faly indrindra handany sy holanina hahasoa ny fanahinareo, na dia araka ny fitombon’ny fitiavako anareo aza no fihenan’ny fitiavanareo ahy” (2 Korintiana 12:15).